လာအိုနိုင်ငံက Sinopharm COVID-19 ကာကွယ်ဆေးနှင့်အတူ သက်ကြီးရွယ်အိုများအား ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု စတင် - Xinhua News Agency
လာအိုနိုင်ငံ ဗီယင်ကျန်းမြို့၌ ဇွန် ၁၇ ရက်က ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံသည့် စင်တာတစ်ခုတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ Sinopharm ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံရန် ပြင်ဆင်နေသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဗီယင်ကျန်း ၊ ဇွန် ၂၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
လာအိုနိုင်ငံ၌ တရုတ်နိုင်ငံ၏ Sinopharm ကာကွယ်ဆေးနှင့်အတူ အသက် ၆၀ ကျော်အရွယ်ပြည်သူများအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေး လှုပ်ရှားမှုအား စတင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း နှင့် လာအိုနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက Sinopharm ကာကွယ်ဆေးနှင့်အတူ ရောဂါအခံရှိသူများနှင့် အသက် ၆၀ ကျော်အရွယ်ရှိ ပြည်သူများအား ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံရန် ခွင့်ပြုချက် ပေးခဲ့ကြောင်း လာအိုနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ကျန်းမာရေးအတွက် သတင်းအချက်အလက် နှင့် ပညာရေးစင်တာက ဇွန် ၁၉ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ဆေးများသည် ဘေးကင်းယုံကြည်စိတ်ချရပြီး အကျိုးများကြောင်း လာအိုနိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် နှင့် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရေး နှင့် ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ Kikeo Khaykhamphithoune က လာအိုနိုင်ငံ ဗီယင်ကျန်းမြို့၌ ပြီးခဲ့သောအပတ်က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် တရုတ်နိုင်ငံ အစိုးရက လှူဒါန်းသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ တတိယသုတ်အတွက် လွှဲပြောင်းပေးအပ်သည့် အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
လာအိုနိုင်ငံအနေဖြင့် ကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကြားတွင် လုပ်ကိုင်နေရသော ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးရှေ့တန်းရှိဝန်ထမ်းများ ၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ နှင့် နိုင်ငံသားအချို့အား Sinopharm ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း လာအိုနိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
လာအိုနိုင်ငံ၌ ယခုအထိ လူပေါင်း ၇၀၀,၀၀၀ ကျော်အား ပထမအကြိမ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ ထိုးနှံပေးထားပြီး လူပေါင်း ၄၀၀,၀၀၀ ကျော်သည် ကာကွယ်ဆေး ဒုတိယအကြိမ် ထိုးနှံထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လာအိုနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ယခုနှစ်ကုန်တွင် နိုင်ငံ့လူဦးရေ ၇ ဒသမ ၂ သန်း၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအား ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
VIENTIANE, June 21 (Xinhua) — Laos has kicked off the COVID-19 vaccination drive for people aged over 60 with China’s Sinopharm vaccine.
The World Health Organization and the Lao Ministry of Health have given the greenlight to vaccinating citizens aged over 60 with the Sinopharm vaccine, as well as those with underlying health conditions, according toareport released by Center of Information and Education for Health under the Lao Ministry of Health on Monday.
China’s vaccines are safe, reliable and efficient, Lao Deputy Prime Minister and Chairman of the National Taskforce Committee for COVID-19 Prevention and Control Kikeo Khaykhamphithoune said atahandover ceremony of the third batch of China-donated COVID-19 vaccines in the Lao capital Vientiane last week.
Kikeo said the Lao side has already vaccinated frontline high-risk border personnel, medical workers and some citizens with Sinopharm vaccine.
So far more than 700,000 people in Laos have received the first dose of COVID-19 vaccines, while over 400,000 people have received the second dose.
The Lao Ministry of Health is planning to vaccinate 50 percent of the country’s 7.2-million population by the end of this year. Enditem
Photo – A medical worker preparesadose of China’s Sinopharm COVID-19 vaccine atavaccination center in Vientiane, Laos, June 17, 2021. Laos has arranged for the administering of China’s COVID-19 vaccines nationwide, which have fully proved their safety and efficacy, Lao People’s Revolutionary Party (LPRP) central committee politburo member, Deputy Prime Minister and Chairman of the National Taskforce Committee for COVID-19 Prevention and Control Kikeo Khaykhamphithoune said. (Photo by Kaikeo Saiyasane/Xinhua)